Ukuqhekeza Intliziyo yakhe eQhelekileyo kwiNoveli | XperimentalHamid
Ukutyibilika kwentliziyo yakhe eQhelekileyo kwaNoveli
Julayi 15, 2020 by Qasim Khan
Luthini umbono wethu wehlabathi? Xa sithwalwa iingqondo zethu azisiyonto ngaphandle kwesilayite ezingenanto. Njengoko sisiva okwenzekayo kunye nokuqhubeka ebomini esi silayidi sifumana imivumbo yokwenza umfanekiso esiyibiza umlingiswa wethu.
Isimo sethu bubuso obubonakalayo bamava ethu. Ingaba luthini uluvo lwentombazana encinci ukuba izakuba yimivimbo echaza imeko yengqondo ibingunobangela wokulimala kunye namanxeba?
Uluhlu lomxholo weNoveli
Ukutyibilika kwentliziyo yakhe eQhelekileyo libali lale ntombazana uJulia. Yintombazana ephilayo nenobuqili esele iqalile ubomi bayo basemva kokuba eyunivesithi njengomabhalana osemncinci kwishishini elaziwayo kwisixeko sayo. Unengqondo yomntwana xa kuziwa kwimibono ebukhali kunye nokuziphatha okuhle xa kuziwa ekuziphatheni.
I-psyche yakhe iyaphuma xa isiza nomtsalane ebantwini. Wayengafani ngolu hlobo. Kodwa amava abuhlungu ngunina kunye naye emva komnye umyeni. Ngubani owangena ebomini bakhe ukuba ayisebenzise kwaye ayimphathe gadalala kwaye ayikho enye into eye yathatha ingqondo kaJulia kude nale mvakalelo.
Uziva ejongene nale meko kangangokuba abahlobo bakhe kunye noogxa bakhe bambiza ngesini ebusweni bakhe. Kuba uhlala nentombi yakhe yaseyunivesithi, oku kunika amahlebezi okuba sisixhobo esifanelekileyo sokukholeka. Ufuna ukufezekisa izinto ezininzi ebomini kodwa ukutshata nendoda akukho kuloluhlu. Nangona kunjalo, umama wakhe unezinye izicwangciso zakhe.
UBarbara ufuna ukuba intombi yakhe ihlale phantsi. Uyabazi ubuntu beentombi zakhe ezinamahloni kwaye uzama konke okusemandleni akhe ukuba abeke umhla kunye namadodakazi wentombazana yakhe. UJulia uqhubeka ngale mihla kwaye ubeka imeko enye kuphela yomtshato, ukuba uyatshata ephepheni kuphela kwaye omnye umntu kufuneka aphile naloo nto.
Akusayi kubakho luhlobo nakuphi na, akukho kupheliswa komtshato, iphepha nje ukubonisa umama wakhe. Kuyabonakala, ebehamba ngeentsuku ezimbini ezidlulileyo engaphumeleli.
Kodwa ngeli xesha uhamba ngomhla kwaye indalo iphela iceba ukumthiyela. Ngobusuku obukhanyisiweyo enyangeni kwikhefi, wadibana nalo mfana mhle. Njengesiqhelo, ubeka iimeko zakhe phambi kwakhe. Uyavuma. Akakholelwa, kodwa batshata ngosuku olulandelayo.
Kuyavela, yayingenguye laa mntu wayefanele ukudibana naye kwikhefi. Wavuma kuphela kuba ene-esile yobuqu yokugaya. Ngapha koko, ngumphathi wenkampani yakhe ayitshatileyo engayamkeli de kube kudala.
Yintoni eza kulandela? Ngaba uza kuphumelela ubomi obunyanyekayo kubuhlobo bendoda? Okanye ngaba uyakufunda ukubaluleka kobambiswano ebomini? Ngaba iya kuvumela ukuba ikhusele intliziyo yakhe?
Yintoni elandelayo? Ngaba uya kubuyiselwa ngokunyaniseka okulinganayo okanye uya kongeza esinye sahluko esibonisa uloyiko kwakhe kumava adlulileyo? Yinike ukufunda ukuze ufumane okungakumbi. Intliziyo yakhe etyiwayo eqaqanjelwa isesandleni sakho ukuba ungabona uhambo lwentombazana eluthandweni.
iindidi umphezulu tags Ukutyatyamba kwentliziyo yakhe eQhelekileyo, Gqibezela, free, Inveli Post yokukhangela
Umtshakazi wesixhenxe kaMongameli Isahluko 96 - 100 [Non-NovelCat Version]
Ukuqhakaza Intliziyo Yakhe Ekhuselweyo Isahluko 01 - 05